'Waldaan Qorannoo Oromoo odeessa seenaa kan mootii cabsuun kan sabaa barreesse' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, OSA
''Ummata sagaleen ukkaamameef dubbachuun akeeka OSAti''
Waldaan Qorannoo Oromoo kora isaa waggaa, ganna 33 keessatti yeroo jalqabaaf Adoolessa dhufu Finfinneetti gaggeessuuf jira.
''Jijjirama Oromiyaa, Itoophiyaafi Gaanfa Afrikaatti tahaa jiru lafa qabachiisuu fi gabbisuun'' mata duree kora kanaa yoo tahu, akeeka ummata sagaleen ukkaamameef dubbachuufi imaammata dhaaboota sirna haaraa ittiin hundeessan, dhimma diinagdee ittiin foyyeessan, naannoo ittiin kunuunsaniifi beekumsa ganamaa burqisiisuu jedhuun gaggeefama,'' jedhan pireezidantiin waldichaa Aadde Kuulanii Jaalataa.
Yaadota teellaatti hambisoofi moofaa tahan mo'achuufi karaa barbaaduun rakkoolee garaagaraa biyyattiin keessa jirtuuf furmaata imaammataa kennuun waan OSA'n hojjechuuf akeeku dha jedhan.
Jaarmoti garaagaraa qorannoowwan OSA'n maxxansutti dhimma bahuun rakkoo Oromiyaafi Itoophiyaa ittiin hiikan hojjechuun waan kora kana gaggeessuun, galma gahuu barbaadan akka tahe dubbatu pirezidantiin kun.
Waldaan kuni kana dura waldaa sagaleen dhiirotaa qofa kan keessatti baay'atu waan tureef isa geeddaruuf, hirmaannaa dubartoootaafi dargaggootaa dabaluuf gara pireezidaantummaa ergan dhufe mariifi hojiiwwan tola ooltummaa dalagamaniiru jedhan Aadde Kuulaniin.
Dhimmi dubartoota aangeessuufi dargaggooti carraa barbaadan hin arganneefi hanqina dhaabotaa gidduu hariiroon kallattii jiraachuun rakkoo biyyattii guddaa waan taheef kora as adeemaa jiru kanarratti qorannoon akka dhiyaatu hoggantuun waldichaa ni abdatu.
Kora baranaa kan duriifi waan dhaaboti biroo dalaganirraa kan adda taasisu ''imaammata rakkoo biyyattii ammaaf furmaata tahan dhaabota mootummaafi ummataaf kennuun hojii irra akka oolu taasisuuf kaayyeefachuudhas'' jedhan.
Keessumaa, gama bulchiinsa gaariin federaalizimii saboota-danuu kan rakkoo nageenyaafi tasgabbii furuu akkamiin fayyadamaa jirra kan jedhu irratti xiyyeeffachuun akka socho'an himaniiru.
Dhaabota hunda hammatoo tahan akkatti ijaarruufi dhaaboota siviilii, dimookiraasii, sirna barnootaafi fayyaa haaressuu danda'an hubachuu barabaannas jedhan.
OSA'n qabsoo Oromoof maal buuse?
Yunivarsiitii Ohaayootti barsiisaa seenaafi OSA keessatti waggootii dheeraaf qorannoo dhiyeessuufi 'yaada haaraa burqisiisuun' hirmaachaa kan turaniif amma immoo kora Finfinneetti qophaa'uuf koree qindeessituu keessatti qooda qabu piroofeesar Daani'el Ayyaanaan.
OSA'n waldaa qorannoofi ''yaadni haaraa kan itti burquu gatii taheef akkatti biyya bulchan, seenaa haaraa hubataniifi yeroo qabsoo qeerroo immoo karaa nagaan akkatti xumuramu yaada dhiyeessuun gumaacheera'' jedhan.
Waldichi ''Oromoon akka seenaa hin qabnetti isa lakkaa'amaa ture'' qorannoo biyyaafi biyyaa alatti hojjetuun naanna'ee saba Oromoo bira yoo gahu ''Oromoon boquu isaa akka ol qabatu qofa osoo hin taane akka dhaabbatee aadaa isaafi seenaasaa boonsaa taheef falmachuu danda'u gama kanaan tumsuun, akka milkaa'ina guddaatti lakkaa'ama,'' Jedhan.
Qorattoota Oromoofi saboota biroo biyya keessa jiran waliin wal arganii hojjechuun danqaa OSA isa tokko ture. Korri Finfinneetti taasifamu hariiroo beektota biyya hambaafi biyya jiran wal quunnamsiisa abdii jedhu qabu.
OSAn dhimmoota irratti xiyyeeffachuun qorannoo taasise keessaa tokko beekumsa ganamaa qonnaan bulaafi horsiisee bulaan Oromoo dhalootaa dhalootatti dabarsaa ture dha jedhan piroofesar Daani'el.
Beekumsi kuni akka hin banneef eegamee, dhaloota dhufutti immoo ammayyummaa waliin wal sime akkamitti darbaa kan jedhurrattii qorannoo taasisuu dubbatu.
Ogummaa Oromoo naannosaa kunuunsuu irratii qabus akka fakkeenyaatti kaasaniiru.
Kana malees, sirna filannoo Oromoo Gadaa keessatti durii jalqabee itti fayyadamaa dhufe beekumsa hammayyaa waliin haaromsanii kanneen naannoo sanaa waliin fayyadamuun haala Gaanfa Afrikaa ni geeddara jennee amanna jedhu.
Seenaan kan sabaati
Biyyoota akka Itoophiyaa mootiidhaan bulaa turan keessatti seenaan kan mootiiti malee kan sabaa miti kan jedhan doktar Daani'el, ''OSAn jalqabumaa odeeffannoo kana cabsee,'' jedhan.
Seenaafi aadaa Oromoon qorachuun kitaabaafi keewwataan maxxansuun akka addunyaan beekuufi qo'annoo biraaf illee akka leecallootti fayyadeera.
Kunimmoo jedhan piroofeesarichi, ''akkatti Oromoon ilaalamu geeddareera jedhu. Kaarikulamii barnootaa keessa galchuufillee OSA'n hojii akka hojjechaa jiru dubbatu.